Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta DF oo lagu soo rogay Amarro culus – Puntland Post
Posted on June 14, 2019 June 14, 2019 by PP-Muqdisho
Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta DF oo lagu soo rogay Amarro culus
Muqdisho (PP) ─ Wasaaradda Warfaafinta Somalia ayaa amarrro culus dul-dhigtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda, kuwaasoo si aan rasmi ahayn uga hawl-geli jiray warbaahinta madaxa-bannaan ee dalka ka jirta.
Xubnaha amarrada la dul-dhigay waxaa ka mid majaajiliistayaasha ka tirsan wasaaradda sida; Maki Xaaji Banaadir iyo Oday Cabdulle, waxaa kaloo sidan oo kale amarro loo dul-dhigay fannaaniinta ka tirsan waaaradda ee qaar ka mid ah warbaahinta gaarka loo leeyahay ka baahiya barnaamijyada u badan wacyi-gelinta.
Wasiirka warfaafinta Somalia, Maxamed Cabdi Xayir [Maareeye] oo dhawaan xilka loo magacaabay ayaa ku gooddiyay markii uu xilka la wareegayay inuu la imaan doono isbedel ballaaran, isgaoo xil cusub u magacaabay fananan ka soo goostay Somaliland oo lagu magacaabo Nimcaan Hillaac.
Sidoo kale, Wariyeyaasha Idaacadda ka hawl-gala ayaa lagu wargeliyay inay ka digtoonaadaan inay ka shaqeeyaan goobo kale oo aan wasaaradda ahayn waxaana wariyihii lagu helo arrintan la sheegay in shaqada laga cayrinayo.
“Runtii tallaabooyinkaan waa kuwo gumeysi cusub ah, waayo qorshaha laga leeyahay waa in shaqaalaha wasaaradda la eryo ee ma ahan mid lagu diidan yahay shaqooyinka warbaahinada kale,” ayuu yiri mid ka mid ah xubnaha ka shaqeeya wasaaradda warfaafinta Somalia.
Suxufiyiinta ka hawl-gala warbaahinta dowladda ayaa qaarkood waxay u soo dhabar-adaygeen hawsha wasaaradda, iyagoo kasoo billaabay meel cabsi leh qaarkoodna ay dishay Al-shabaab, sabablo la xiriira madaxaad idaacaddaas uga shaqeysaan.
Ugu dambeyn, Amarradan ayaa waxay imaanayaan iyadoo dhawaan uu xilka wasaaradda iska casilay Daahir Maxamuud Geelle oo wasiir ka ahaa muddo aad kooban, isagoo sheegay inay isaga iyo RW Somalia isku fahmi waayeen shaqooyinka wasaaradda, isaguna uu go’aansaday inuu xilka ka dago.